लगानी Archives - Page2of 195 - Chanakya Post
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको संचित मुनाफाबाट लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले गत आवको वितरण योग्य मुनाफाबाट सेयरधनीलाई कर प्रयोजनसहित ८.५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरेको लाभांश नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र कम्पनीको आगामी […]
नेप्सेमा इतिहासकै दोस्रो ठूलो पहिरो, यी २४ कम्पनीको मूल्यमा नेगेटिभ सर्किट
काठमाडौं । सेयर बजारमा इतिहासकै दोस्रो ठूलो पहिरो गएको छ । नेप्से सूचक आज एकै दिन तेहेरो अंकले घटेको हो । बजार खुलेदेखि निरन्तर ओरालो लागेको बजार ११४ अंकले घटेर बन्द भएको छ । यो नेप्सेमा एकैदिन आएको इतिहासकै दोस्रो ठूलो गिरावट हो । यसअघि २०७७ असार २३ गते सबैभन्दा धेरै १२३ अंकले घटेको […]
‘नेपालमा ब्याजदर र सेयर बजार बीच सम्बन्ध छैन, अब घट्न रोकिन्छ’
काठमाडौं । हालसम्मकै उच्च ३२०० अंकसम्म पुगेको नेप्से परिसूचक केही हप्ताको अन्तरालमै २७५० हाराहारी आइपुगेको छ । छोटो समयको यो तीव्र घटाइलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । कतिपय लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जाका गरेको कडाइको परिणाम भन्न थालेका छन् । राष्ट्र बैंकले कुनै व्यक्तिले एउटा बैंकबाट बढीमा ४ करोड […]
सेयर बजारमा पहिरो जारी, देखिएन सम्हालिने छाँट
काठमाडौं । सेयर बजारमा पहिरो जाने क्रम आज पनि जारी रहको छ । बजार खुल्ने बित्तिकै करिब ६० अंकले घटेको बजार केही सम्हालिए पनि फेरि (११ः४५ बजेदेखि) ओरालो लागेको हो । २७५२ विन्दुमा पुगेको बजार फर्किएर २७९२ सम्म आइपुगे पनि फेरि ओरालो लागेको हो । ११ः५० बजेसम्म नेप्से ५७ अंकले घटेर २७५४ अंकमा आइपुगेको […]
नेपाल ल्युब आयलको लाभांश पाउन सेयर किन्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । नेपाल ल्युब आयलले प्रस्ताव गरेको ३५ प्रतिशत लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीले प्रस्तावित लाभांश पारित गर्न असोज १८ गते साधारण सभा डाकेको छ । सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले असोज ५ गतेदेखि १८ गते सम्म बुक क्लोज मिति तोकेको छ । तसर्थ, आज (असोज ४ गते)सम्म कायम रहने […]
असोज ११ देखि बुद्धभूमि नेपालको आइपीओ खुल्ने, कति कित्ता भर्न पाइन्छ ?
काठमाडौं । बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर लिमिटेडले असोज ११ गतेदेखि प्राथमिक साधरण सेयर (आइपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ ।कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरले ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्ने भएको हो । निष्काशन हुने कुल ८ लाख कित्ता सेयरमध्ये १६ हजार कित्ता (२ प्रतिशत) कम्पनीका कर्मचारी र ४० हजार कित्ता […]
रोकिएन नेप्सेमा पहिरो जाने क्रम, ७६ अंकको भारी गिरावट
काठमाडौं । साताको कारोवारको अन्तिम दिन आज बिहिवार सेयर बजारमा भारी गिरावट आएको छ । आज नेप्से परिसूचक ७६.६५ अंकले घटेर २८१२.३८ विन्दुमा बन्द भएको हो । साताको अन्तिम दिन २२९ कम्पनीको ९ अर्ब ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बढीको १ करोड ६४ लाख ६८ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । आज कारोबारमा […]
नेप्सेमा उच्च अंकको गिरावट, यी हुन् धेरै मूल्य घट्ने ८ कम्पनी
काठमाडौं । सेयर बजारमा लगातार गिरावट आएको छ । मंगलबार १८ अंकले घटेको बजार आज पनि दोहोरो अंकले घटेको हो । सूचकसँगै कारोबार रकम पनि दिनदिनै घट्दै गएको छ । गतहप्ता औसतमा दैनिक १० अर्ब बढीको कारोबार हुँदै आएकोमा आज सवा ५ अर्बमा सीमित भएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो […]
बिलेटमा अन्तःशुल्क वृद्धि : नीतिगत भ्रष्टाचार कि आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास ?
ट्रायल पास गरेकाले दशैँ अघि लाइसेन्स नपाउने, कार्ड ल्याउन कम्तीमा २ महिना लाग्ने
अब ईसेवा मार्फत एनआईसी एसिया क्यापिटलकाे नविकरण शुल्क बुझाउन सकिने
माछापुच्छ्रे बैंकले पायो ३ अर्वको ऋणपत्र जारी गर्ने अनुमति
पाँच लाख ३२ हजार कित्ता आईपीओ आउँदै, दुई संस्थाले पाए अनुमति
अनलाईन सेयर कारोबारमा जोडीने लगानी कर्ता ११ हजार मात्रै
‘स्वरूप’ बदल्दै बाजेको सेकुवा : मेनु र आन्तरिक सजावटमा नयाँपन, धमाधम शाखा विस्तार
विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्दै, तर परीक्षणका लागि छैन मापदण्ड र ल्याब
मापदण्ड कार्यन्वयनमा चुक्दै महानगर, पार्किङस्थलमा खुलेआम व्यापार हुँदा पनि मूकदर्शक
Reporter - Kabita Ghimire
Reporter - Sunil Kunwar